Imephu yeBentley, ulindelo lwam lokuba Ndawonye-iGeofumadas
Ikhaya/Geospatial - GIS/Bentley Map, ithemba lam ngenxa Yiba Ndawonye
Ndandifumene isimemo sokuya kwi-Together Together, isiganeko esivusa ukulindela okuthandayo, ngoko kubonakala ukuba ubunzima bezoqoqosho bubekwe kwaye kufuneka sivuselele amathuba.
Ngeengxaki zehlabathi, kunyaka ophelileyo uBentley waqalisa kwiintlanganiso ze-intanethi kwaye ushiye ukuphela Uphefumulelwe. Kwakungekho ngcamango embi, kodwa ekusebenzeni ukuba ukudibanisa nombonisi kulahlekile, xa umfuna ekupheleni kwaye umbuza izihloko ezithile angazange azitsho kwingxelo yakhe. Khumbula ukuba iminyhadala yonyaka ayibonisi iindaba nje kuphela, kodwa ikwazisa ukukhula kwegama. Kwimeko yeeNkqubo zoLwazi lweJografi, ukuthenga inkqubo kwi-intanethi akusebenzi, kuba ukuphunyezwa, uqeqesho kunye nenkxaso zizinto iinkampani ekufuneka zichonge phantsi kwamanqanaba athile okuthembela kunye nokusebenza. Ngamaxesha onxibelelwano, ubudlelwane obakhelwe kwimisitho, unxibelelwano olufunyenwe kuphononongo lwebhlog, kunye nolwazi olufunyenwe noluntu oluku-intanethi okanye imithombo yeendaba zentlalo ibonakala isebenza.
Zikhona zonke iisemina ezikwi-Intanethi, ezimangalisayo ukuba zingabonwa nangaliphi na ixesha, kodwa ngokwenyani kufunyenwe ukuba kuthi thina siya kumnyhadala sithwele okulindelweyo, amathandabuzo kunye nokudideka esiqinisekileyo ukuba sizakushiya kwiintsuku ezine zomnyhadala . Kwaye, ekuphenduleni, ngokunokwenzeka kwinto abayifumene namava, iBe Together iyaziswa, nabasebenzisi boluntu babuze:
Izikhokelo zomkhiqizo osebenzisanayo
Iinkomfa kwaye zibonisa imiboniso
Iitheyibhuli ezijikelezayo kunye namaqonga ahambelana nawo
Yonke into, into engenakuyenza kunyaka odlulileyo, ukubona ubuso.
Ukubandakanyeka kwezinye zeeprojekthi ezinxulumene ne-ESRI, iManifold kunye neBantley Imephu, ndinothotho lwemibuzo ethe ngqo endinethemba lokusombulula. Isisiseko sokusebenzisana, ii-wfs kunye nezizathu zokuba kutheni zingandisebenzeli, kodwa ugxininiso lwam kulo mbuzo:
Ukuba ndingumsebenzisi we-Microstation, ndonwabile kakhulu kwi-SE version, ndiyakwazi ukuqonda i-viscera ye Geographics ne-GeoWeb Umshicileli, kunokwenzeka njani ukuba ndibiza kakhulu ukuba ndiqonde ukuhamba kweProgram yeBentley?
Ngamanye amaxesha i-interlocution yam sele ibe kunye nokuThengiswa kweNgingqi yeGeospatial, kulo mzekelo ndinomdla kwizinto zobuchwepheshe phantsi kwengxoxo elula:
-Bona, le yiprojekthi yam, andihlose ukusebenzisa GeoWeb Umshicileli okanye iProvense Wise, kuphela i-PowerMap:
Ndifuna ukuqala, ukudala i-schema xfm, ngalezi zigaba zintathu: I-Cadastre, i-Ordering, i-Cartography
-Ngomqolo wesigxina ndifuna ukudala ungqimba olubizwa ngokuba yiPavel
-Ndifuna ukungongeza iimpawu ezine: Ikhefu leCadastral, isimo seerhafu, indawo kunye nesithombe
-Ndi ke ndifuna ukwenza isitshixo ngokusekelwe kumaski, imeko yerhafu esekelwe kwisizinda seBoolean, indawo esekelwe ekubaleni okuqinileyo, ifoto ngokusekelwe kwisixube.
-Ukuya kwinqanaba le-cadastral ndifuna ukwenza umsebenzi ophakamisa iphaneli ukuze ndigcine idatha, kwaye nayo indivumela ukuba ndiyihlele. Yenza ikhonkco kunye netafile yokufikelela, apho iqhosha lakho le-cadastral lifana khona.
-Ngako ke ndifuna ukudala umsebenzisi ogama linguCastastro, othabatha loo mpawu kwaye ubheka umthi weMenenja yoLawulo.
Kudala ndizama, kodwa ndifuna ukukubona kwasekuqaleni, kuba kukho into kuloo mlambo ingasebenziyo kwangoko, eyesibini iyasebenza, kwaye kwezinye iimeko ithatha isithathu. Mhlawumbi kusile, kodwa ukuba ndiyakwazi ukukuqonda, ndingonwaba kwaye ndingagqibezela eseleyo ngokomzekelo.
Emva koko, ndaya kumbuzo olandelayo:
Kutheni kungekho khokelo lokuchaza oku ukuze abantu abaqhelekileyo babone ukuba i-Bentley Imephu ayikho ngaphesheya kwelanga?
Nantoni na eyenzekayo, ndiyathemba ukuzisa iimpendulo kwiblogi, kulabo bafumana iimeko ezifanayo okanye abanokulindela ngale ndlela.
17 ku-20 kaMeyi 2010
Apha ungayilandela kwi-Facebook
Bentley Map Ngaba kuba nzima ngakumbi?
Iphuso lesilawuli, iBentley V8i
Njengoko ukudala kwibloko Microstation (Cell)